Puntland iyo Jubbaland oo Taageeray Aqalka Sare, Diidayna Habraacyada Been Abuurka ah ee Golaha Shacabka – Goobjoog News
Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa saacaadihii la soo dhaafay waxaa ay taageereen dadaallada aqalka sare ee xal u raadinta iyo isu soo dhoweynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, waxaa kale oo isku aragti ka noqdeen habraacyada aqalka sare been abuurka ku sheegay uu lagu ansixiyey golaha shacabka.
Aqalka sare, oo ah midka baarlamaanka federaalka ah ku matala danaha maamul goboleedyada ayey sidoo kale ku taageereen go’aanka uu ka qaatay habraacyada horyaalla golaha shacabka ee lagu sheegay inuu ka duwan yahay midkii labada aqal isku afgarteen.
Puntland ayaa qoraal ay xalay soosaartay ku sheegtay “Dowladda Puntland waxaa ay bogaadineysaa dadaallada uu hormuudka ka yahay guddoonka aqalka sare ee BF, kaas oo ka shaqeeyey in madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah DF ay isugu yimaadaan shir wadatashi ah oo lagu lafagurayo arrimaha doorashooyinka 2020/2021. Puntland waxaa ay sidoo kale soo dhoweysay warsaxaafadeedkii ee aqalka sare ee BF ee 9-kii bishan June, 2020 iyo guddiyada loo saaray qabashada shirkaas.
Dhankeeda, Jubbaland waxay aqalka sare ka tiri “ Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ay soo dhoweyneysaa qaraarka maanta uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabduulahi ee tix-raaciisu ahaa XG/428/B-10/20, ujeedkiisuna aheyd ka fal-celinta xeerka been abuurka ku saleysan oo ansixintooda ka shaqeeyeen qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka.
combitic global caplet tadalafil tadalafil 20 mg tadalafil c...
rasa research tadalafil tadalafil powder for sale buy liquid...
cialis soft tabs cialis bayer 20 rgeneric cialis...
how much does cialis cost genericcialis cialis 20mg prices...
levitra 20mg tablet levitra shelf life viagra vs levitra...